IGulf of Alaska: Izici, Izinganekwane nokubaluleka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
El i-gulf of alaska Iyaziwa ngokuba yindawo lapho kuhlangana khona izilwandle ezimbili. Ingalo egobile yoLwandlekazi iPacific etholakala ogwini oluseningizimu ye-Alaska futhi ihlukaniswe yiNhlonhlo yase-Alaska nesiQhingi sase-Kodiak. Lonke uhlangothi lomfula luyinhlanganisela yamahlathi, izintaba nezinguzunga zeqhwa ezinenani elikhulu ngokwezinto eziphilayo.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela konke odinga ukukwazi ngeGulf of Alaska, izici zayo kanye nokuhlukahluka kwezinto eziphilayo kuphela.
2 Isimo sezulu saseGulf of Alaska
3 Inganekwane yezilwandle zeGulf of Alaska
Kungashiwo ukuthi iGulf of Alaska inenhlanganisela yamahlathi, izintaba nezinguzunga zeqhwa ezibenza babe nelukuluku lokuvakashela. Ugu lwayo lumangele, lunezindawo zokungena ezijulile njengeCook Inlet nePrince William Sound (amanzi amabili axhunyiwe amade), kanye neYakutat Bay neCross Sound. Uma sihlaziya iGulf of Alaska ngokubuka kwesimo sezulu, ikhiqiza iziphepho. Ngenxa yendawo nezici zemvelo, kungenye yezindawo lapho kuneziphepho eziningi.
Ngaphezu kwenani elikhulu leqhwa neqhwa elikhona eningizimu ye-Alaska, kuphumela kokunye kakhulu kokugxila kweqhwa embuthanweni oseningizimu ye-arctic. Iziphepho eziningi zihamba zibheke ngaseningizimu futhi zidlula ogwini lwaseBritish Columbia, eWashington nase-Oregon. Cishe zonke izimvula ezingena ngezikhathi ezithile zonyaka zivela eGulf of Alaska ngenxa yolwandle olutholakala kuleli gquma.
Kuyimvelo engokwemvelo efriziwe ngokuphelele futhi eyenza kube indawo ehlaba umxhwele. Ukucaciswa kwayo akuyona lapha kuphela, kepha kungenye yezindawo ezimangalisa kakhulu emhlabeni. Futhi kungenxa yokuthi izimo zabo zemvelo zenza ukuthi kube nezinyunyana zokugeleza kwamanzi okuhlukile okuhlangana kuleli banga. Kukhona inganekwane engamanga yokuthi eGulf of Alaska icwila ezilwandle eziningana. Lokhu akufani nalokhu. Kuyinyunyana yamanzi anosawoti namanzi amasha avela ezinguzungeni zeqhwa neqhwa elincibilikayo.
Lapho sibona ukuthi amanzi amasha avela ezinguzungeni zeqhwa ahlangana namanzi anosawoti oLwandle iBaltic, awahlangani. Lokhu kuhlangana kwamanzi kudala indawo enhle phakathi noLwandlekazi iPacific. Phambilini bekucatshangwa ukuthi kwakuyinyunyana yezilwandle eziningana, kepha namuhla siyazi ukuthi lesi simo esimangazayo Kungenxa yomehluko phakathi kasawoti nokuminyana kwamanzi. Njengoba sazi, lapho amanzi enosawoti omningi, uba mkhulu kakhulu. Amanzi aminyene avame ukwehla ajule ngenkathi aminyene ekhuphukela phezulu. Ngalezi zici, amabhande amanzi awakwazi ukuxubaniswa kahle futhi lo mngcele obonwayo ungaziswa.
Isimo sezulu saseGulf of Alaska
Njengoba okuwukuphela kwesici iGulf of Alaska esinaso hhayi kuphela ekuhlanganeni kwamanzi, sizohlaziya isimo sezulu saso. Isimo sezulu sikhuluma yindawo ekhiqiza isiphepho. Ifundelwa ngokuqhubeka kwesimo sezulu njengoba inokuziphatha okunelukuluku. Leli qiniso lengezwe eqinisweni lokuthi kuneqhwa eliningi neqhwa eningizimu ye-Alaska futhi kuholela kokunye kakhulu ukugxila eningizimu ye-Arctic Circle.
Ucwaningo lukhombisile ukuthi izivunguvungu eziningi ezenzeka eGulf of Alaska zifudukela ogwini lwaseBritish Columbia, Washington nase-Oregon. Njengoba kunikezwe izici zale ndawo, isimo sezulu sayo kanye nokuthi kuyisimo sezinto ezingavamile ezifana nokuhlangana kwamanzi olwandle nezinguzunga zeqhwa, iGulf of Alaska isiphenduke enye yezindawo ezithakazelisa kakhulu kule planethi. Ngaphandle kokungabaza, idonsela ukunaka kwabo bonke abafuna ukubona izindawo ezihlukile.
Inganekwane yezilwandle zeGulf of Alaska
Ngokuqinisekile wake wathinta isithombe esejwayelekile sezilwandle ezimbili ezibhekene lapho ungene kwi-inthanethi. Le migoqo emibili ibilokhu kukhulunywa ngayo njengeNyakatho Pacific noLwandle iBering. Lezi zinqwaba zamanzi ngobukhulu obukhulu zizama ukulwa zodwa ngaphandle kokuxubana empeleni. Umehluko phakathi kwala manzi akukhona ukuthi aqhamuka ezilwandle ezahlukene kodwa aqhamuka ezindaweni ezahlukene. Izici zabo azifani ngakho-ke azikwazi ukujoyinwa.
Inganekwane ithi ukuba ngamanzi amabili olwandle oluhlukile kubangela into engavamile yokubuka. Futhi kungamanzi ohlobo oluthile ahlangana ngaphandle kokuxubana empeleni. Kula maphuzu kufika ekubhekaneni ngokungathi ngamanzi amabili anemibala ehlukene. Ukubheka ukuthi lokhu kungenzeka ngendlela yangempela, sizohlaziya umsuka wayo. Ama-eddy angama-eddy akhiqizwa yimisinga nolwandle olwedlulisa amanzi. Kungashiwo ukuthi yizinjini zemvelo ezibhekele ukusabalalisa amanzi neziduli. La ma-Eddy akhiqiza izindawo ezinothe kakhulu ngomsoco ngokuqhamuka kwezakhi zemvelo ezahlukahlukene zomsoco kusuka ekujuleni kuya ezindaweni ezingajulile.
Imvamisa iba ngamakhulu amakhilomitha ububanzi futhi iyabonakala kuma-satellite. Kukhona i-whirlpool engasogwini lweGulf of Alaska ethwala inqwaba yamadwala eqhwa akhukhulwa yimifula efana neCopper. Lo mfula uphethe inani elikhulu lobumba eliguqula umbala wamanzi futhi liwenze abe nodaka. Ama-eddy yizinto ezinquma amandla oketshezi oluthile njengamanzi.
Isizathu sokuthi amanzi angahlangani ndawonye akukhona ukuthi avela ezilwandle noma ezilwandle ezahlukahlukene, kepha kungenxa yokuthi anokuxinana okuhlukile. Umehluko wobuningi ubangelwa ukushisa noma usawoti. Kuleli fomu lamafutha, amanzi amabili angaziphatha sengathi ayengamanzi amabili ahlukile. Ngokuhamba kwesikhathi, amanzi agcina e-homogenizing futhi agcina ngokuxubana ngokwemvelo. Kodwa-ke, ngenkathi lezi zinto zenziwa kukhona umgoqo wemvelo phakathi kwamanzi amabili ahlukene kepha ibizwa ngokuthi i-thermocline uma kwenzeka kube namazinga okushisa ahlukene kanye ne-halocline uma kwenzeka kuba nosawoti ohlukile, njengoba kwenzeka eGulf of Alaska.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngeGulf of Alaska nezimpawu zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » IGulf of alaska
Isithombe sokuqala somgodi omnyama